Umlomo omningi amabhodlela okuphuza amanzi China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Ukugijima Amanzi Okuphuza Amanzi,Amabhodlela Amanzi Emanzi Okuphuza Amanzi,Amanzi Okuphuza Amanzi Okuphuza Amanzi Omkhulu
Home > Imikhiqizo > Ibhodlela leMidlalo leMidlalo > Umlomo omningi amabhodlela okuphuza amanzi
I-Model No.: X1
Umlomo wethu omkhulu ophethe amabhodlela okuphuza amanzi unomklamo omkhulu kakhulu womlomo, ngakho ungakwazi ukuwugcwalisa kalula futhi ugijime, futhi ube nomlomo we-valve umlomo wokuphuza amanzi, ungakwazi nje ukucindezela ibhodlela namanzi ukuphuma. futhi ikakhulukazi eyenziwe ngamaphesenti angu-100% ebhodini lokudla, kuphela ucezu lomlomo olwenziwe ngamakhemikhali angu-100% okudla kokudla, futhi senza ne-bandage ibhodlela ngalinye, ngakho-ke uma usebenza, akudingeki ukhathazeke ngamanzi akho ibhodlela liphuma, ngemuva kokuphuza, ungaligcina, bese-ke, akudingeki ukhathazeke ngokuvuza.
Ulapha: >> Hlunga amabhodlela amanzi angamakhemikhali >> I- 1000ml yekhamera yokuhlunga imicibisholo yamanzi angamacilisi
Umlomo omningi amabhodlela okuphuza amanzi yimikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. Umlomo wethu omkhulu ophethe amabhodlela okuphuza amanzi ngokuyinhloko ukusebenza kwekhaya lethu. Izinto ezisemlonyeni wethu omkhulu ziqhuba amabhodlela okuphuza amanzi i-100% ye-BPA yebanga lobuchwepheshe bebanga lobuchwepheshe kanye ne-PP. Umlomo Wide egijima amanzi okuphuza amabhodlela yethu ngokuphelele non-enobuthi, futhi ovunyelwe iSigungu FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyifektri, ngakho-ke singakunika izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
Amanzi Okuphuza Amanzi Okuphuza Amanzi Omkhulu
Ukugijima Amanzi Okuphuza Amanzi Amabhodlela Amanzi Emanzi Okuphuza Amanzi Amanzi Okuphuza Amanzi Okuphuza Amanzi Omkhulu I-Marathon Ukugijima Amanzi Amanzi Ukuvuza Okungcolile Amanzi Amanzi I-Abicula Ibhodlela Lokuphuza Amanzi Amakhemikhali aphuza amanzi aphuza amanzi Amanzi Okuqina Kwesicucu Samanzi